Ciidamada Al shabaab oo dib u qabsaday magaalada Xudur kadib markii ay isga bexeen ciidamada Itoobiyaanka |
Ciidamada Al shabaab oo dib u qabsaday magaalada Xudur kadib markii ay isga bexeen ciidamada Itoobiyaanka
Wararka laga helayo magaalada Xudur ee gobalka Bakool ayaa waxa ay xaqiijinayaan in ciidamada al Shabaab ay lawareegeen magalada Xudur kadib markii ciidamada Ethiopia ay magaalada ka baxeen.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa xaqiijinaya in ciidanka Alshabaab ay magaalada Xudur dhowr jiho kasoo galeen Isgaarsiinta Magaalada oo ay ciidanka Ethiopia saaka hawada ka saareen ayaa hada dib ugu soo laabatay.
Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in maamulkii degmada Xudur ay subaxnimadii hore ee maanta ay isaga bexeen kadib markii ciidamada Ethiopia ee amaankooda sugayay ay bilaabeen isaga huleelida magaalada.
Ma’aha mid cusub in ciidamada Ethiopia ay isaga baxaan magaalo ay horay ugala wareegeen ciidamada xarakada Al Shabaab, waxaana laxasuustaa in qeybo badanoo kamid ah Galguduud sida degmada Ceelbuur oo bilooyin ay ku sugnaayeen kadib ay isaga bexeen Shabaabkiina ay kusoo laabteen durbadiiba.
ugu danbeytiine mid ka mid ah sarakiisha AL SHABAAB ayaa shegay in ciidanka Al shabaab ay Ciidamada ehiopia & DF Somaliya ku go’doomiyeen magaalada ayna ciriiri gashay noloshooda taas oo sababtay in ciidamada Ehipopia ay isga baxaan guud ahaan magaalada Xudur oo mudo ku dhaw sand maamulaayay magaaladaasi.